အမည်နှင့်အမည်သစ်ကိုရသော အန်သိုနီ Cimino ။ ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အဓိပ်ပာယျ, ဇာစ်မြစ်, ထိုအမည်နှင့်အမည်သစ်ကိုရသော အန်သိုနီ Cimino ၏လိုက်ဖက်တဲ့။ အားလုံးအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ။
အန်သိုနီ Cimino အဓိပ္ပာယ်ကို
နာမကိုအမှီ အန်သိုနီ Cimino နှင့်အမည်သစ်ကိုရသော Cimino ၏အဓိပ္ပာယ်ကို၏အကျဉ်းချုပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: အဓိပ္ပာယ် အန်သိုနီ ။
ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အဓိပ္ပာယ်ကို အန်သိုနီ ။ ပထမအမည်ကို အန်သိုနီ ဘာကိုဆိုလိုသလဲ
အန်သိုနီ ၏ compatibility နဲ့ Cimino
အမညျ၏ compatibility Cimino နာမည် အန်သိုနီ ။
အန်သိုနီ မျိုးရိုးအမည်နှင့်အတူ Compatibility ကိုစမ်းသပ်အမည်။
အန်သိုနီ အခြားအပထမဦးဆုံးအမည်များနှင့်အတူ Compatibility ကိုစမ်းသပ်။
နာမည်အများစုမှာဘုံနှင့်အဆန်းမျိုးရိုးအမည် အန်သိုနီ ။
ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ အန်သိုနီ ။
အခြားဘာသာစကားများ, စာလုံးပေါင်းနှင့်အသံထွက်မျိုးကွဲ, ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အမျိုးသမီးနှင့်အထီးမျိုးကွဲ အန်သိုနီ ၌ဤပထမဦးဆုံးနာမည်။
အန်သိုနီ ပတျသကျ. အလှနျသေးနုအမည်များ။
သင်ဘယ်လိုကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများနှင့်ဘာသာစကားများ အန်သိုနီ စီရင်သလဲ?
ဘယ်လိုပထမအမည်ကို အန်သိုနီ Learn အခြားတိုင်းပြည်တွင်အခြားသောဘာသာစကားအားဖြင့်ပထမအမည်ကိုမှကိုက်ညီ။
အန်သိုနီ အကောင်းဆုံးနာမကိုအမှီအဓိပ္ပါယ်များ: ဒေါသ, ဖန်တီးမှု, စေတနာစိတ်နှင့်, မတည်ငြိမ်သော, စေ့စေ့နားထောင်. ရယူ အန်သိုနီ နာမတျော၏အဓိပ္ပာယ်ကို.
အန်သိုနီ ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ. English form of the Roman family name Antonius, which is of unknown Etruscan origin. The most notable member of the Roman family was the general Marcus Antonius (called Mark Antony in English), who foraperiod in the 1st century BC ruled the Roman Empire jointly with Augustus ရယူ အန်သိုနီ ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ.
အန်သိုနီ name ကို ပတျသကျ. အလှနျသေးနု: တိုနီ. ရယူ အန်သိုနီ များအတွက်အမည်ဝှက်.
ကူးယူမှတ်တမ်းတင်သို့မဟုတ်ဘယ်လိုပထမအမည်ကိုအသံထွက်ဖို့ အန်သိုနီ: AN-thə-nee, AN-tə-nee. အန်သိုနီ စီရင်ဖို့ကိုဘယ်လို.
အန်သိုနီ ဘို့ပြောရလျှင်အမည်များကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများနှင့်ဘာသာစကားများ: Akoni, Anakoni, Anĉjo, Andon, Andoni, အန်ထောလ်, Antanas, Ante, Anto, Antoine, Anton, Antonello, Antoni, Antony, Antonij, Antonije, Antonijo, အန်တိုနီယို, Antonio, Antonis, Antonius, Antono, Antoon, António, Antón, Antônio, Antton, Anttoni, Antun, Antwan, Doncho, Teun, Teunis, Theun, Theunis, တစ်တန်ကို, Tonči, Tonći, Tone, Tony, Toni, Toninho, Tonino, Tonio, Tony, Toño, Toon. ရယူ အန်သိုနီ အခြားဘာသာစကားများ.
နာမည်အသုံးအများဆုံးမျိုးရိုးအမည် အန်သိုနီ: Praill, Mwangi, Yiu, Cruz, Francis. ရယူ နာမည်မျိုးရိုးအမည်စာရင်း အန်သိုနီ.
နောက်ဆုံးအမည်နှင့်အတူအသုံးအများဆုံးအမည်များ Cimino: Renato, Ethan, အန်သိုနီ, Darrell, Bill. ရယူ Cimino နှင့်အတူသွားသောအမည်များ.
အန်သိုနီ ၏ compatibility နဲ့ Cimino 78 ဖြစ်ပါသည်. ရယူ အန်သိုနီ ၏ compatibility နဲ့ Cimino.
အန်သိုနီ Cimino အလားတူအမည်များနှင့်မျိုးရိုးအမည်
အန်သိုနီ Cimino တိုနီ Cimino Akoni Cimino Anakoni Cimino Anĉjo Cimino Andon Cimino Andoni Cimino အန်ထောလ် Cimino Antanas Cimino Ante Cimino Anto Cimino Antoine Cimino Anton Cimino Antonello Cimino Antoni Cimino Antony Cimino Antonij Cimino Antonije Cimino Antonijo Cimino အန်တိုနီယို Cimino Antonio Cimino Antonis Cimino Antonius Cimino Antono Cimino Antoon Cimino António Cimino Antón Cimino Antônio Cimino Antton Cimino Anttoni Cimino Antun Cimino Antwan Cimino Doncho Cimino Teun Cimino Teunis Cimino Theun Cimino Theunis Cimino တစ်တန်ကို Cimino Tonči Cimino Tonći Cimino Tone Cimino Tony Cimino Toni Cimino Toninho Cimino Tonino Cimino Tonio Cimino Tony Cimino Toño Cimino Toon Cimino